Etu ị ga - esi Mee Gị Email Marketing Mobile Friendly | Martech Zone
"Afọ kwa afọ, site na Machị 2011 ruo Machị 2012, email mepere na ngwaọrụ mkpanaka toro pasent 82.4," dịka ọnụọgụ ndekọ ekwentị Return. Ime mobile akụkụ nke ozi ịre ahịa email abụghịzi maka mgbasa ozi email dị elu; ọ bụ ihe dị mkpa.
N'oge na-adịbeghị anya, Delivra bipụtara Otu esi eme ka ịre ahịa Email gị nke enyi na enyi, ihe enyemaka na-enye 2012 mkpanaka mkpanaka, ọnụọgụ, na aro maka otu esi edozi ahịa email gị maka ndị na-ege gị ntị na-aga.
Akwụkwọ akụkọ ọcha na-atụle ihe atọ dị oke mkpa maka ịga nke ọma na email na-agagharị na usoro dị mkpa iji jiri ụdị atụmatụ a.
Ebee ka ndị na-ege gị ntị na-agụ email?
You na-ekepụta ọdịnaya maka ndị na-agụ agagharị?
Email gi a na-eme mkpanaka mkpanaka?
Maka azịza nke ajụjụ ndị a na iji hụ na ozi ịntanetị gị na-abata na afọ mkpanaka, budata otu esi eme ka ahịa gị Email Mobile Friendly Friendly.
80% nke ndị na-azụ ahịa na-ahụ ịgụ ozi ịntanetị ahịa na ekwentị ha adịghị mfe karịa na PC. You na-ekepụta ozi ịntanetị ndị na-ege gị ntị nwere ike ịgụ ma zaghachi na ngwa ngwa ha? Ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ ga-abụ na a na-akwaga ya na ahịhịa. Ekwela ka nke ahụ mee!
Tags: Ndiaguemail MarketingMobile na Mbadamba ụrọemail mkpanakausoro ekwentị
Mee 16, 2012 na 5: 39 PM
Daalụ maka ibipụta nke a. Anyị na-agwa onye ahịa taa okwu banyere mkpa nke mkpanaka yana etu o siri dị mkpa iji nweta uru ya mgbe ọ dị n'ụdị nnukwu uto dị egwu!